Shweet Wallpaper — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဂျူလီယာပွတ် • အောက်တိုဘာလ 29, 2014 တွင် 9:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
NoahClements • နိုဝင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 8:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤအနောက်ခံပုံများ Love! တော်တော်လေး Shweet!!
ယောနသန် • နိုဝင်ဘာလ 12, 2014 တွင် 6:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ရုံမှဖွင့်နိုင်အောင်အေးမြ dood “Shweet” ;: D
Nico • နိုဝင်ဘာလ 20, 2014 တွင် 4:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ကအကောင်းဆုံး Belfair ၌ဘုရားသခင်ငါ၏အဘုရားကျောင်း Belfair ညီလာခံဖို့လာနေကြ
ဂျယ်ရမီသောမတ်စ် • မေ 14, 2016 တွင် 4:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်တို့ရှိသမျှသည်အချိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးအဆိုတော်များတဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်အမှန်တကယ်ငါ့ကိုသင့်ရဲ့အော်ဒီယိုစာအုပ်များမြင့်တက်ကျေးဇူးတင်စကားခရီးစဉ်မှတဆင့်အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ကူညီ. P.s ငါသည်သင်တို့၏အကြီးမားဆုံးပန်ကာဖွစျပါ၏.
သူပုန် • ဇန္နဝါရီလ 28, 2017 တွင် 3:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Aj Powell • သြဂုတ်လ 5, 2019 တွင် 12:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I’ve been looking forasweet victory wallpapers for my phone. Still my favorite song ever! Very inspiring! သင်ပြုသမျှသောအဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်!